PSJTV | के हो एलर्जी? कस्तो हुन्छ यसको असर?
काठमाडौं: कुनै पनि चिज वा बस्तुले शरीरमा पर्ने उल्टो असरलाई एलर्जी भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि चिजको सम्पर्कमा आउनेबित्तिकै शरीरमा उल्टो असर देखिने अबस्था नै एलर्जी हो। जस्तो कि घाम, बोटविरुवा, धुलो, बासना, औषधि आदि। कसैलाई माछा सुँघ्नै हुँदैन। कसैलाई धुलोको एलर्जी हुन्छ भने कसैलाई औषधिले एलर्जी हुन्छ।
एलर्जीमा हुने ‘मास्ट’ सेलभित्र हिस्टामिन नामक रसायन हुन्छ। हिस्टामिन मास्ट सेलबाट छुटेर बाहिर निस्कियो भने जुन भागमा पुग्यो, त्यहीँ एलर्जी हुन्छ। माससेल सबैभन्दा बढी छालामा हुन्छ। त्यसपछि नाक, आन्द्रा, श्वास प्रश्वास नली, खाँखा, पाठेघर तथा योनीमा हुन्छ।
एलर्जी भयो भने ती अंग प्रभावित हुन्छन्। छालामा भयो भने चिलाएर डाबर आउने, नाकमा भयो भने हाच्छिउँ आउने, श्वास प्रश्वास नलीमा भयो भने खोकी र दम हुने, आँखामा भयो भने आँसु आउने हुन्छ।
यसमध्ये सबैभन्दा बढी फोक्सोमा हुन्छ। जुन एलर्जीको कारण श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। हामीकहाँ लक्षणअनुसार एलर्जीको उपचार हुन्छ। एलर्जी पत्ता लागेपछि त्यो चिजबाट टाढा रहनुपर्छ। यो जानकारी आजको नागरिकले छापेको छ।